မကြာခင်တော်ရတော့မယ့် ယောက်မလေးကို မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့တဲ့ နန္ဒလှိုင် – Cele Top Stars
မကြာခင်တော်ရတော့မယ့် ယောက်မလေးကို မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့တဲ့ နန္ဒလှိုင်
ပရိသတ်အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောမောင်လေး စိန်ဖြိုးလှိုင်ကတော့ မောင်ဆိုတဲ့ အနုပညာနာမည်နဲ့ အနုပညာလောကမှာ အချိန်တစ်ခုအထိ ရပ်တည်ခဲ့တာ ပရိသတ်တွေလည်းသိမှပါ ။
အဲဒီနောက်မှာတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ရီရီပွင့်ဖြူနဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီး အခုဆို ချစ်သူသက်တမ်း (၇) နှစ်တောင်ကျော်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ။
ရီရီနဲ့ စိန်ဖြိုးတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကတော့ သူတို့ရဲ့ Official Page လေးထောင်ပြီး Vlog လေးတွေရိုက်ကူးခဲ့ကြသလို ပရိသတ်တွေလည်း သူတို့အတွဲလေးကို အရမ်းကို သဘောကျနေကြတာပါ ။ ဒီဇင်ဘာလ (၄)ရက်နေ့ကတော့ ရီရီပွင့်ဖြူရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးဖြစ်ပြီး
မကြာခင်တော်ရတော့မယ့် ယောက်မလေး နန္ဒာလှိုင်က Happy birthday ရီရီ! ဆန္ဒနဲ့ဘဝ တထပ်ထဲကျပါစေ ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ စိန်စိန်နဲ့ရီရီကင်ထားတဲ့ကျောက်ပုဇွန်ကင်လေးကို ရီရီ့မွေးနေ့အတွက်ကျွေးတာ ဆိုပြီး ပုံနဲ့တကွ သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့် ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။
ပရိသတ်တွေကတော့ ရီရီအတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေ ပေးခဲ့ကြပြီး စိန်ဖြိုးရဲ့ချစ်သူကို နွေးနွေးထွေးထွေးဆက်ဆံပေးတဲ့ နန္ဒာလှိုင်တို့ သမီးယောက်မ ဆက်ဆံရေးလေးကို အားကျကြောင်း မှတ်ချက်တွေရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကလည်း ရီရီအတွက်ေ မွးနေ့ဆုမွန်ကောင်းလေးတွေ ပေးခဲ့ကြပါဦး ။
ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ နႏၵာလွိုင္ရဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာေမာင္ေလး စိန္ၿဖိဳးလွိုင္ကေတာ့ ေမာင္ဆိုတဲ့ အႏုပညာနာမည္နဲ႔ အႏုပညာေလာကမွာ အခ်ိန္တစ္ခုအထိ ရပ္တည္ခဲ့တာ ပရိသတ္ေတြလည္းသိမွပါ ။
အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးေခ်ာေလး ရီရီပြင့္ျဖဴနဲ႔ ခ်စ္သူေတြျဖစ္ၿပီး အခုဆို ခ်စ္သူသက္တမ္း (၇) ႏွစ္ေတာင္ေက်ာ္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္ ။
ရီရီနဲ႔ စိန္ၿဖိဳးတို႔ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ သူတို႔ရဲ့ Official Page ေလးေထာင္ၿပီး Vlog ေလးေတြရိုက္ကူးခဲ့ၾကသလို ပရိသတ္ေတြလည္း သူတို႔အတြဲေလးကို အရမ္းကို သေဘာက်ေနၾကတာပါ ။ ဒီဇင္ဘာလ (၄)ရက္ေန႔ကေတာ့ ရီရီပြင့္ျဖဴရဲ့ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးျဖစ္ၿပီး
မၾကာခင္ေတာ္ရေတာ့မယ့္ ေယာက္မေလး နႏၵာလွိုင္က Happy birthday ရီရီ! ဆႏၵနဲ႔ဘဝ တထပ္ထဲက်ပါေစ ဆိုတဲ့စာသားေလးနဲ႔အတူ စိန္စိန္နဲ႔ရီရီကင္ထားတဲ့ေက်ာက္ပုဇြန္ကင္ေလးကို ရီရီ့ေမြးေန႔အတြက္ေကၽြးတာ ဆိုၿပီး ပုံနဲ႔တကြ သူမရဲ့လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေနတဆင့္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္ ။
ပရိသတ္ေတြကေတာ့ ရီရီအတြက္ ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္းေတြ ေပးခဲ့ၾကၿပီး စိန္ၿဖိဳးရဲ့ခ်စ္သူကို ေႏြးေႏြးေထြးေထြးဆက္ဆံေပးတဲ့ နႏၵာလွိုင္တို႔ သမီးေယာက္မ ဆက္ဆံေရးေလးကို အားက်ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေတြေရးသားခဲ့ၾကပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးကလည္း ရီရီအတြက္ေ မြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္းေလးေတြ ေပးခဲ့ၾကပါဦး ။
ဟင်းချက်ခဲတဲ့ ချစ်ဇနီးလက်ရာ ဟင်းကောင်းတွေကို အားရပါးရစားရင်း မိန်းမစိတ်ကောက်ရအောင် အမျိုးမျိုးစနောက်ခဲ့တဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့ ဗီဒီယို
သီချင်းဟောင်းပြန်ဆိုတယ် ဆိုပြီး ဖောင်းထုနေကြသူတွေကို ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ မေလသံစဉ်